5 Dariiqo oo Loogu Dili Tartankaaga Nuxurka | Martech Zone
5 Ways oo Loogu Dili Tartankaaga Mawduuc
Talaado, Disembar 28, 2010 Axad, Janaayo 19, 2014 Douglas Karr
Qof baa weydiiyay Quora haddii boggooda ay ku tartami karaan qayb aad u camiran oo ka mid ah barta wax lagu qoro. Su'aashu way fiicneyd inaan ka jawaabo halkaas… Waxaan rabay inaan dhamaantiin la wadaago jawaabteyda.
Dabcan way tartami karaan! Macluumaad weyn had iyo jeer kor ayuu u kici doonaa, iyada oo aan loo eegin sida boosku u badan yahay. Farsamooyinka kala duwan ee aad codsan karto waa:
Dhaqso - Haddii aad tahay barta ugu horreysa ama blog-ka ee si isdaba joog ah u soo qaada mawduuc, waxaad ogaan doontaa wax badan
Kor ahaw - Fahamka raadinta iyo saameynta ay ku leedahay waxyaabahaaga ayaa kaa caawin doona inaad uruuriso taraafikada mashiinka raadinta.
Noqo mid bulsheed - Ka faa'iideyso warbaahinta bulshada si aad u ballaadhiso bartaada una dhex gasho warbaahinta bulshada bartaada si ay kuwa kale kuugu weyneeyaan adiga. Badhamada wadaagga, badhannada dib loo qoro iyo ogeysiisyada ku saabsan Twitter, Facebook iyo LinkedIn ayaa ah waajib.
Noqo mid cajiib ah - Marka ay jiraan wax looga hadlayo bartaada, dadku way hadli doonaan oo dad badan baa iman doona.
Noqo mid joogto ah - Qoritaanka nuxurka iyo akhriska sii kordhaya waxay u baahan tahay dardar iyo joogto ah. Ha u maleynin in hal qoraal oo weyn uu kuu sameyn doono adiga post qoraal kasta wuxuu ku darayaa qiimo siyaado ah.
Mawduucyada waaweyni had iyo goor way ka buunbuunin doonaan top si buuxdana waxay uga faa'iideysan doonaan dhammaan aaladaha si ay kor ugu qaadaan maaddadaada oo ay uga dhigaan mid si fudud loo heli karo inay gabi ahaanba fure yihiin.
Tags: Analyticsbeen abuur boodhnatiijooyinka ganacsigasuuqgeyntaraadinta shirarka
Waxaan Kaliya Qiimeynaa Aaladaha Aan Isticmaalno
Autoupdates Ku guuldareysiga WordPress? FTP Fashilmay?
Sharciga Caawinta Weyn
29, 2010 at 1: 43 PM
Si dhib yar ayaan ku heshiin kari lahaa 5-taas qodob. Fudud, laakiin ma fududa. Taasi waa gadaashayda kaliya. Sameynta dhammaan 5 ka mid ah waxay u baahan doontaa maalgashi culus. Liiska intiisa badani waxay ku lug leeyihiin maalgashi waqti muhiim ah (oo aan dhahaynin xaq maaha), laakiin # 4 waa nooc ka duwan. “Inaad noqoto qof cajiib ah” kuma imaaneyso si fudud maxaa yeelay waxaad gelisaa waqti badan, in kasta oo aad joogto tahay, mid ayaa u qaadan kara, tirakoob ahaan wuxuu kordhiyaa fursadaha soo saarista wax cajiib ah. Waxaan ku dhiiran lahaa mala-awaal in adiga, Doug, aad dacwad u sameyn karto fahamka ujeedada badan ee "noqoshada cajiibka ah"
Anna waan been sheegay, waxaan haystaa riix kale oo gadaal ah.
Mararka qaar Mawduuca Weyn ayaa kor u kaca. Inta badan, iyada oo aan lahayn ujeedo dhiirrigelin ama istiraatiijiyad suuqgeyn ah, Mawduuc Weyn waxay u badan tahay inuu ku noolaado mugdi iyo mashiinka raadinta oo aan la arki karin. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo waxaan soo jeedin lahaa aragti yar oo ka duwan qoraalkaaga. Dedaal Weyn ayaa u oggolaan doonta qof inuu ku tartamo suuq internet ah oo dadku ku badan yihiin (fikradaha ama alaabada). Mawduuc Weyn ayaa ka dhigaya mid aad u fudud.
30, 2010 at 11: 33 AM
Waan heshiin kari waayey wax badan! Mawduuc weyn ayaa runtii noqon kara hanti aad u wanaagsan dadaalkaaga suuq-geynta. Marka la qoro, waa inaad ka faa'iideysataa dhammaan kanaallada si aad dib-u-warshadayn ugu sameyso oo aad ugu wareejiso booska internetka.
Jan 4, 2011 saacadu markay ahayd 5:10 PM
Boostada weyn Doug! Waan ku raacsanahay Biilka Caawinta Weyn - iyada oo aan nooc ka mid ah istiraatiijiyad ka qaybqaadasho ah, waxa meesha ku jira oo keliya ayaa sugaya in la ogaado. Iibsashada ugu fiican ayaa tan u qaadatay heer cusub, kafiiri sheekadan Ad Age: http://adage.com/article?article_id=147956
Waad ku mahadsan tahay dhammaan Doug Awesome, waxaan u baahanahay inaan si dhakhso leh u soo qabanno!
Madaxweyne / Agaasime guud